Somali News 10.08.21
Published October 9, 2021 at 12:32 PM CDT
Degmooyinka iskuulada Iowa waxay sii haysan karaan waji -xidhka ka dib markii garsoore federaal ah uu oggolaansho hordhac ah ka siiyay dacwad waalidiinta iyo u doodayaasha xuquuqda naafada.
Garsoore Robert Pratt ayaa si ku meel gaar ah u hor istaagay sharciga gobolka ee ka mamnuucaya iskuulada inay amraan maaskaro. Xukunkiisa oo la sii daayay maanta (Jimce) wuxuu joojin doonaa dhaqangelinta sharciga ilaa dacwada laga xalliyo.
Pratt wuxuu tusaale u soo qaatay kororka qarxa ee kiisaska COVID-19 ee carruurta ee xukunkiisa, isagoo leh carruurtu waxay la kulmi karaan "waxyeelo aan laga soo kaban karin" haddii sharciga loo oggolaado inuu sii socdo.
Guddiga Diiwaan -gelinta South Dakota ayaa khamiistii meel mariyey saddex siyaasadood oo beddeli kara xarumaha kala -duwanaanshaha ee xarumaha. Xeerarku waxay la xiriiraan xarumaha "Fursadda Dhammaan".
Hoggaamiyaha Argus ayaa ku warramaya in xarumahan loogu tala galay inay noqdaan “dukaan hal mar ah” oo loogu talagalay baahida ardayda. Gov. Kristi Noem ayaa sheegtay inay aaminsan tahay in xarumahu ay tahay inay beddelaan xarumaha kala duwanaanshaha ee xarumaha kuleejka.
Heshiis qandaraas ayaa dhex maray dawladda, shaqaalaheeduna waxay siin doonaan mushahar kordhin aad u weyn, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya daryeelka caafimaadka qaarkood iyo shaqooyinka aadka loogu baahan yahay.
Heshiiska cusubi wuxuu siin doonaa shaqaalaha gobolka ee daboolaya 24/7 tas-hiilaad mushaharka 3 saacaddii ah.
Sidoo kale, laga bilaabo Nofeembar 1, waxay bixisaa 20% kordhinta hagaajinta khadka-mushaharka ee shaqooyinka lagu tilmaamay baahida aadka u sarreeya iyo 30% kordhinta hagaajinta khadka-mushaharka shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee loo aqoonsaday inay muhiim yihiin.
Somali News 10.07.21
Garsoore ayaa diiday codsi 17 jir ah oo ahaa in lagu maxkamadeeyo sidii dhallinta ku dhimatay toogasho ka dhacday badhtamaha magaalada Sioux City gugii.…